Ukuphupha umlungu – Buza Noma Yini
Solved26.35K views January 24, 2022 Amaphupho
Mabuza666	 June 10, 2020 2 Comments
Kuchaza ukuthini ukuphupha umlungu?
Anonymous Answered question January 24, 2022
Petro commented September 20, 2021
Ukuphupha umlungu yibhadi kwabanye abantu…nizoxabana nomuntu wakho…noma abantu osondelene nabo
uchwepheshe363	 Posted August 8, 2020	 1 Comment
Kade ngenza ucwaningo ngibuza abantu abaningi abazi ngamaphupho,
abanye bathi ukuphupha umlungu yinhlanhla abanye bathi ukuphupha umlungu yibhadi. Abanye bathi ukuphupha umlungu kukhomba isilwane.Ngokubona kwami kuncike ekutheni umlungu osephusheni lakho ukwenzani noma wenzani. uma ekuncoma noma ekujabulela izinto zakho zizohamba kahle, uma uxabana nomlungu wakho ephusheni kusho ukuthi izinto zakho azizohamba kahle. Uma uphuphe umlungu ekushaya noma ekukwebha, isilwane leso kumele uyosikhipha.
Anonymous Posted new comment July 9, 2021
Portia commented July 9, 2021
I had a dream like that but mina bengizibuka esibukweni kodwa kudos ngiyingane nje (teenager) wearing skimpy clothes (shorts)
Zama mbambo (anonymous)	 Posted January 24, 2022	 0 Comments
Ngiphuphe nihamba emfuleni omkhulu amanzi encwebile ishkabathiclean bengenyukamina ugeleza ubhekezansi ngabonga isandlasomuntu ogqithwe ihlabathi kuvele usandla esifumbethe kubonakalengathi ulelengesisu ngithengisethukile nganyuka ngabonga sebebabilikebelelengesisu amakhandabo ebhejezanzi lowokuqala belelsakuvudla lababawuthu bebelele ngezisunabobebekezansi kuchazanikelo ngithengiphilemfilengamba endkeliyesizulu eyenyukelayi ngathibangiphumelaphezulu ngabukangaphesheyakwalomfula ngabonomunye umlungu omdala onentshebemhlophe ubehleliphansikwewa emukelabengihambakhona bengiohethe uplastik onempuphu ngayiyichithasakuchelapha ngiqubekanohambholwami ngiphsmesengyongenehlathini nempuphu bisincane eplastikini ngabele to ichazukuthini?
Zama mbambo Answered question January 24, 2022
Anonymous	 Posted December 12, 2021	 0 Comments
Kuchazani ukuphupha ingane yomlungu imoyizela isewindini lakho ikubuka ulele? Uma uvuka uphuma uyibheka uyithole ingasekho?
Anonymous Answered question December 12, 2021
Shaun (anonymous)	 Posted November 13, 2021	 0 Comments
Kusho ukuthini ukuphupha uthandana nendiya?
Shaun Answered question November 13, 2021
ntsasakazi (anonymous)	 Posted November 3, 2021	 0 Comments
ukuphupha umlungu esithi sayina (sign) endaweni enesikhundla esiphezulu ngathi mina ngizobe ngisayina kweyoba ngu cashier ngoba ngingazi ukuthi yisiphi leso sikhundla siphezulu asitshoyo ngabe kuchazani?
ntsasakazi Answered question November 3, 2021
Mlungisi (anonymous)	 Posted September 20, 2021	 1 Comment
Kusho ukuthini ukuphupha umlungu weslisa omaziyo kodwa akhulume nawe kukahle nje
Mlungisi Posted new comment April 10, 2022
Mlungisi commented April 3, 2022
Kuchaza ukuthin ukuphupha umlungu oyi politician odumile esekhaya engadini ekha imfino, umalume wami use esecela use umsebenzi kuye.
Sihle (anonymous)	 Posted June 20, 2021	 0 Comments
Kusho ukuthini uma nenza ucansi naloyomlungu ephusheni, futhi ezifunela?
Sihle Answered question June 20, 2021
Luleka4	 Posted June 4, 2021	 1 Comment
Ukuphupha ushelwa Umlungu kusho ukuthini?
Luleka Posted new comment January 16, 2022
Luleka commented November 11, 2021
Kusho ukuthini ukuphupha wenza ucansi nomlungu osegugile?
Luyandarh zungu (anonymous)	 Posted May 11, 2021	 0 Comments
Mina ngiphuphe umlungu one ngane yomfana e paki sixoxa nje
Luyandarh zungu Answered question May 11, 2021
Regina (anonymous)	 Posted April 14, 2021	 0 Comments
Mina ngiphuphe umlungu sibhaka amakhekhe and ekuseni uma ngiya emsebenzini ngambona loyo mlungu
Regina Answered question April 14, 2021